Transport in Zimbabwe - Unionpedia, the concept map
30 relations: A10 road (Zimbabwe), A11 road (Zimbabwe), A2 road (Zimbabwe), A4 road (Zimbabwe), A5 road (Zimbabwe), A6 road (Zimbabwe), A7 road (Zimbabwe), A8 road (Zimbabwe), AllAfrica.com, Beitbridge Bulawayo Railway, Binga village, Chalala, Kariba, Zimbabwe, Kwekwe-Gokwe Highway, Lake Kariba, List of airports in Zimbabwe, National Railways of Zimbabwe, P12 road (Zimbabwe), Politics of Zimbabwe, R2 road (Zimbabwe), R3 road (Zimbabwe), R5 road (Zimbabwe), R6 road (Zimbabwe), R7 road (Zimbabwe), Trans-African Highway network, Transport in Botswana, Transport in Mozambique, Transport in South Africa, Transport in Zambia, Zimbabwe.
New!!: Transport in Zimbabwe and A10 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and A11 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and A2 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and A4 road (Zimbabwe) · See more »
A5 Highway is a national road in Zimbabwe.
New!!: Transport in Zimbabwe and A5 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and A6 road (Zimbabwe) · See more »
A7 Road is a national road in Zimbabwe.
New!!: Transport in Zimbabwe and A7 road (Zimbabwe) · See more »
The A8 Highway is a paved primary trunk road in Zimbabwe running from Bulawayo to Victoria Falls.
New!!: Transport in Zimbabwe and A8 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and AllAfrica.com · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Beitbridge Bulawayo Railway · See more »
Binga is a district on the south eastern shore of Lake Kariba in the province of Matabeleland North, Zimbabwe.
New!!: Transport in Zimbabwe and Binga village · See more »
Chalala is a town and a municipality in Amreli district in the state of Gujarat, India.
New!!: Transport in Zimbabwe and Chalala · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Kariba, Zimbabwe · See more »
Kwekwe-Gokwe Highway or the R84-7 Highway is an all-weather bitumen macadam highway in Zimbabwe running from Kwekwe to Gokwe passing through Zhombe.
New!!: Transport in Zimbabwe and Kwekwe-Gokwe Highway · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Lake Kariba · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and List of airports in Zimbabwe · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and National Railways of Zimbabwe · See more »
The M15 Makuti-Kariba Highway is a 2-way asphalt surface international highway from the A1 Highway at Makuti to Zambia via the Kariba Dam Wall.
New!!: Transport in Zimbabwe and P12 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Politics of Zimbabwe · See more »
R2 Road (Zinbabwe) is an international road in Zimbabwe from the Capital Harare to Pluntree border post.
New!!: Transport in Zimbabwe and R2 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and R3 road (Zimbabwe) · See more »
R5 Highway is a regional road corridor running from Harare to Mutare.
New!!: Transport in Zimbabwe and R5 road (Zimbabwe) · See more »
The R6 Highway is a primary road, a trunk road and regional road corridor link road in Zimbabwe.
New!!: Transport in Zimbabwe and R6 road (Zimbabwe) · See more »
R7 Highway is a primary, paved, regional road corridor in central Zimbabwe virtue of linking the regional corridors R1 Highways that runs from Harare to Beitbridge via Masvingo, and R2 Highway that runs from Harare to Plumtree via Bulawayo.
New!!: Transport in Zimbabwe and R7 road (Zimbabwe) · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Trans-African Highway network · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Transport in Botswana · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Transport in Mozambique · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Transport in South Africa · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Transport in Zambia · See more »
New!!: Transport in Zimbabwe and Zimbabwe · See more »
A0 Highway, A0 highway (Zimbabwe), A10 (Zimbabwe), A2 Toll, A3 (Zimbabwe), A5 (Zimbabwe), A7 (Zimbabwe), A8 (Zimbabwe), A9 (Zimbabwe), A9 TOLLWAY, Autofamba, Autoruwendo, B roads in Zimbabwe, Maautofamba, Transportation in Zimbabwe, Transportationin Zimbabwe, Zimbabwe/Transportation.